ကျောက်ပန်းတောင်းက ဘိုးဘွားရိပ် သာမှာ ဘိုးဘွားတွေအတွက် လိုအပ် နေတဲ့ရေတွင်း အလှုအတွက် သူကိုယ် တိုင်မတည်ကာလှူဒါန်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ ယုန်လေး – XB Media Myanmar
ပရိသတ်ကြီးရေ ယုန်လေး ကတော့ အနုပညာအပေါ် ချစ်ပြီးအနုပညာလမ်းမှာ လျှောက်လှမ်းဖို့ ခက်ခဲနေတဲ့ တက်သစ်လူငယ်တွေကို ကူညီပံ့ပိုးနေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါ။ ဒုက္ခရောက်သူ တိုင်းကို အမြဲ တတ်နိုင်သလောက် အကူအညီပေးတတ်တဲ့ စိတ်ထားကောင်းလွန်းတဲ့ ပရဟိတ စိတ်အပြည့်ရှိတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် အနုပညာမောင်နှ မတွေအပြင် ပရိ သတ်တွေကပါ လေးစားချစ်ခင်နေကြရတာပါ။
သီချင်းသစ်တွေမှာလည်း တက်သစ်စလူငယ်တွေကို တွဲခေါ်ကာ မြေတောင်မြှောက်ပေးလေ့ရှိသူ ဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာအလုပ်တွေကိုသာမက ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုလည်း ထိပ်ဆုံးကလုပ် ဆောင်နေသူတစ်ဦးပါ။ အမြဲပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး မသိလို့အမှားတွေပြုလုပ်ခဲ့ရင်လည်း ပရိသ တိ တွေကျေနပ်လောက်တဲ့ထိ တောင်းပန်တတ်တဲ့ ရိုးသားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါပဲနော်။
လက်ရှိမှာတော့ “ကျွန်တော်လည်း ခက်ခဲတဲ့ ကာလတွေကိုဖြတ်သန်းနေရပါတယ် . အဲ့အတွက် . အရင်လို အကူညီလို တဲ့ သူတိုင်းတွေ့ရင် မလှူနိုင်တော့ပါဘူး . ဒါပေမယ့် ဒီနှစ် ၁လပိုင်းမှာ စပြီး အရင်လို တက်တက်ကြွကြွ နဲ့ အလုပ်တွေ ပြန်လုပ်ပါတယ် . ၁ ရက် ၁လ မှာ ကြေညာရိုက်ခွင့် ပေးတဲ့ Steel Dragon ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။Vit C Orange . M Net နဲ့ တခြား အ လုပ်တွေပါ အရင်လို တက်ကြွစွာ ပြန်လုပ်ရပါတော့မယ် ။
အဲ့ အတွက် ထုံးစံအတိုင်း လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေကို တက်နိုင်သလောက်လေး တွေပြန်ကူပါတော့ မယ် ။၁ ရက်နေ့ကတော့ လူကြမ်းမင်းသားကြီးများကို အလုပ်ပေးနိုင်သလို . ဆန် ဆီ လိုအပ်တာ များလည်း ကူညီ နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခု အရင်လ ထဲက အကူညီတောင်းထား တဲ့ကျောက်ပန်းတော င်း ဘိုးဘွားရိပ်သာ မှဘိုးဘွားတွေ အတွက် ရေတွင်း လိုအပ်နေတဲ့ အတွက်ရေ တွင်း အတွက် အများကြီး လှူချင်ပါသော်လည်း အခုမှ အလုပ်တွေ ပြန်စတဲ့ အတွက်
ကျွန်တော် ၅ သောင်း စမတည်ပြီး ကျွန်တော် နဲ့ အတူ ဘိုးဘွားတွေ အတွက် ရေတွင်း လေး အ ကောင်ထဲ ဖော်ဖို့ အတွက်အလှူ ခံ ချင်ပါတယ် ”ဆိုတဲ့ စာလေးနဲ့ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက် စာမျက် မှာ ဖော်ပြခဲ့တာပါ။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါ တယ်နော်။
ပရိသတ္ႀကီးေရ ယုန္ေလး ကေတာ့ အႏုပညာအေပၚ ခ်စ္ၿပီးအႏုပညာလမ္း မွာ ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႔ ခက္ခဲေနတဲ့ တက္သစ္လူငယ္ေတြကို ကူညီပံ့ပိုးေနတဲ့ အႏုပညာရွင္ တစ္ဦးပါ။ ဒုကၡေရာက္သူ တိုင္းကို အၿမဲ တတ္ႏိုင္သေလာက္ အကူအညီေပးတတ္တဲ့ စိ တ္ထားေကာင္းလြန္းတဲ့ ပရဟိတ စိတ္အျပည့္ရွိတဲ့ အႏုပညာရွ င္တစ္ေယာ က္ျဖစ္ တာေၾကာင့္ အႏုပညာေမာင္ႏွ မေတြအျပင္ ပရိ သတ္ေတြကပါ ေလးစား ခ် စ္ခင္ေနၾကရတာပါ။
သီခ်င္းသစ္ေတြမွာလည္း တက္သစ္စလူငယ္ေတြကို တြဲေခၚကာ ေျမေတာ င္ေျ မႇာက္ေပးေလ့ရွိသူ ျဖစ္ပါတယ္။အႏုပညာအလုပ္ေတြကိုသာမက ပ ရဟိ တ လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ထိပ္ဆုံးကလုပ္ ေဆာင္ေနသူတစ္ဦးပါ။ အၿမဲေ ပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ၿပီး မသိလို႔အမွားေတြျပဳလုပ္ခဲ့ရင္လည္း ပရိသ တိ ေတြေက်န ပ္ေလာက္တဲ့ထိ ေတာင္းပန္တတ္တဲ့ ႐ိုးသားတဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္ဦးပါပဲေနာ္။
လက္ရွိမွာေတာ့ “ကြၽန္ေတာ္လည္း ခက္ခဲတဲ့ ကာလေတြကိုျဖတ္သန္းေနရပါတယ္ . အဲ့ အတြက္ . အရင္လို အကူညီလို တဲ့ သူတိုင္းေတြ႕ရင္ မလႉႏိုင္ေတာ့ပါဘူး . ဒါေပ မယ့္ ဒီႏွစ္ ၁လပိုင္းမွာ စၿပီး အရင္လို တက္တက္ႂကြႂကြ နဲ႔ အလုပ္ေတြ ျပန္လုပ္ပါ တယ္ . ၁ ရက္ ၁လ မွာ ေၾကညာ႐ိုက္ခြင့္ ေပးတဲ့ Steel Dragon ကိုလည္း ေက်း ဇူးတင္ပါတယ္ ။Vit C Orange . M Net နဲ႔ တျခား အ လုပ္ေတြပါ အရင္လို တက္ႂကြစြာ ျပန္လုပ္ရပါေတာ့မယ္ ။
အဲ့ အတြက္ ထုံးစံအတိုင္း လိုအပ္တဲ့ ေနရာေတြကို တက္ႏိုင္သေလာက္ေလး ေတြျ ပန္ကူပါေတာ့ မယ္ ။၁ ရက္ေန႔ကေတာ့ လူၾကမ္းမင္းသားႀကီးမ်ားကို အလု ပ္ေ ပးႏိုင္သလို . ဆန္ ဆီ လိုအပ္တာ မ်ားလည္း ကူညီ ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။အခု အရင္လ ထဲက အကူညီေတာင္းထား တဲ့ေက်ာက္ပန္းေတာ င္း ဘိုးဘြားရိပ္သာ မွဘိုးဘြားေတြ အ တြက္ ေရတြင္း လိုအပ္ေနတဲ့ အတြက္ေရ တြင္း အတြက္ အမ်ားႀကီး လႉ ခ်င္ပါေသာ္လည္း အခုမွ အလုပ္ေတြ ျပန္စတဲ့ အတြက္
ကြၽန္ေတာ္ ၅ ေသာင္း စမတည္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ နဲ႔ အတူ ဘိုးဘြားေတြ အတြက္ ေရတြင္း ေလး အ ေကာင္ထဲ ေဖာ္ဖို႔ အတြက္အလႉ ခံ ခ်င္ပါတယ္ ”ဆိုတဲ့ စာေလးနဲ႔ သူ႔ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တာပါ။ ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ ပရိသတ္ႀကီးအားလုံး သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾ က ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါ တယ္ေနာ္။
အသက် (၂၆) နှစ်အရွယ် မိခင်တစ် ယောက်ရဲ့ လှပနုပျိုမှုတွေနဲ့ အပျော် ရွှင်ရဆုံးမွေးနေ့လေးကို ဖြတ်သန်းခဲ့ တဲ့ မြတ်ရတနာကျော်